“Haddii Siidhiwadeyaashii Na Dhexdhexaadinayay ay noqoto Aniguna 5 Xubnood Baan Leeyahay Adiguna Xubin Baad Leedahay, Yaa Aqbalaya, Dee Waa Ma Suuroobayso” Siyaasi Buubaa – somalilandtoday.com
“Haddii Siidhiwadeyaashii Na Dhexdhexaadinayay ay noqoto Aniguna 5 Xubnood Baan Leeyahay Adiguna Xubin Baad Leedahay, Yaa Aqbalaya, Dee Waa Ma Suuroobayso” Siyaasi Buubaa
(SLT-Hargeysa)-Siyaasi Ismaaciil Hurre Buubaa oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee Waddani, ayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi us oo jeediyay inuu dhegayto tabashada xisbiga Waddani oo aanu dhegaha ka furaysan, maadaama buu sheegay xisbigaasi yahay mid boqolkiiba konton helay aqlabiyada dadka.
Ismaaciil Hurre Buubaa ayaa ka hadlay sida kaliya ee lagu xalin karo tabashada saamiqaybsiga kuraasta baarlamaanka, waxaanu yidhi; “Saamiqaybsi hagaagsan oo la samayn karaa ma jiro haddaan tirakoob la samaynin, waayo dadku waxay dhibanayaan cod (one man one vote), tusaale ahaan boqolkii kun qof ee codeeya ayaa lagu qaybiyaa.”
Waxa uu ka hadlay doorashada dhawaan golaha guurtidu ku mudaysay December 2019 iyo dareenka xisbiga Waddani ka qabo ayaa waxa uu yidhi;
“dee Siidhiwadeyaashii na dhexdhexaadinayay haddi aniguna 5 xubnood baan leeyahay adiguna xubin baad leedahay ay noqoto, yaa aqbalaya, dee waa ma suuroobayso. Waynnu ogsoonahay labada xisbi ee sheeganaya, midna wuxuu leeyahay 4% midna 53% ayuu helay, kolkaa xisbiga Kulmiye uun baa doonaya inuu noqdo xisbi kaliya oo meesha iska walwalaaqda cid la tartantaana aanay jirin, taasina waa dariiqa loo maro kalitalisnimada, wax caqliga galena maaha, caqligaasina waa mid caalamku ka koray.”
“xukuumaddu sanad bay talada haysaa oo in badan baa u hadhsan markaa madaxweynaha waxa looga baahan yahay xisbiga waddani sidii ay wax uwada qaban lahaayeen, hadduu doonayo in waddanku hagaago.”